Emirates inotangazve ndege kuMexico City kuburikidza neBarcelona
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Emirates inotangazve ndege kuMexico City kuburikidza neBarcelona
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
BCN-MEX nzira ichaitwa pamwe neyemaviri-kirasi Emirates Boeing 777-200LR iyo inopa 38 Bhizinesi Kirasi zvigaro uye 264 zvigaro muEconomy Kirasi
Emirates yakachengeteka uye zvishoma nezvishoma yakatangazve mashandiro pane yayo network
Yatangazve basa pakati peDubai-Barcelona-Mexico ichashandira vatengi veEmirates kuMexico uye ichipa imwe sarudzo kune vafambi
Iyo sevhisi ichapawo yekuwedzera kubatanidza kumisika yepasirese yekutengesa kweMexico
Emirates yazivisa kuti ichatangazve masevhisi mana evhiki kuMexico City (MEX) kuburikidza neBarcelona (BCN) kubva munaChikunguru 2, 2021, kuvhura zvakare kubatana uye kuwedzera kutengeserana nekushanya ichipa vatengi pasi rese hukama hwakawanda, nyore uye sarudzo.
Iyo BCN-MEX nzira ichaitwa pamwe neaviri-kirasi Emirates Boeing 777-200LR iyo inopa makumi matatu neshanu Bhizinesi Kirasi zvigaro mune 38-2-2 kumisikidza uye 2 zvigaro muEconomy Class. Emirates ndege EK264 ichasimuka Dubai na 255: 03hrs, ichisvika muBarcelona pa25: 08hrs isati yasimuka zvakare na35: 10hrs uye ichisvika muMexico City na50: 16 musi iwoyo. Ndege yekudzoka EK05 ichasimuka Mexico City na256: 19 hrs, ichisvika muBarcelona na40: 13hrs zuva rinotevera. EK45 ichasimuka zvakare kubva kuBarcelona zuva rimwe chete na256: 15hrs yakananga kuDubai uko kwaichasvika na30: 00 hrs zuva rinotevera (nguva dzese ndedzeko).
Basa rakatangwazve pakati peDubai-Barcelona-Mexico richashandira vatengi veEmirates kuMexico uye rinopa sarudzo yakawanda kune vafambi vanobva kuEurope, India, South East Asia uye Middle East kuburikidza neDubai kana Barcelona. Iyo sevhisi ichapawo yekuwedzera kubatanidza kumisika yepasirese yezvinhu zvekuMexico zvinotumirwa kunze kwenyika zvakaita semakotapeya, michero, mango, zvikamu zvemotokari uye zvekurapa. Emirates SkyCargo yanga ichibhururuka nendege kuenda / kubva kuMexico City kubvira 2014 yatove, zvichiratidza makore manomwe ekushandira nyika mwedzi uno. Munguva ye COVID-19 denda, Emirates SkyCargo yakaenderera mberi nekubatana kwayo kwezvinhu kuMexico City pane ndege dzevatakuri uye dzevapfuuri, zvichiunza majekiseni ePPE uye COVID-19 anodikanwa munyika ichiri kuenderera mberi nekutsigira kutengeswa kweMexico.
Vatengi veEmirates vanobva kuUAE uye kutenderera pasirese vava kugona kuronga kufamba kwavo zviri nyore uye nyore sezvo Mexico ichiramba yakavhurika vashanyi nevashanyi. Mexico inzvimbo inozivikanwa kune vebhizinesi nevanozorora vafambi vepasirese, kunyanya kubva kuUAE, Spain, Pakistan, Singapore, Egypt neRebhanoni. Mexico zvakare iri kumusha kuMiddle East nzanga dzinogona ikozvino kutora mukana webasa ratangwazve